कमरेड अभि | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 10/23/2011 - 20:28
कमरेड अभि र मेरो परिचय लामै हो । तर साह्रै नजिक भनिहाल्न चाहिँ अलि मिल्दैन ।
महिना, गते यकिन भएन, तर बार भने शुक्रबार नै हुनुपर्छ । नत्र म सुटको पहिरनमा कालो ब्याग बोकेर त्यस रेस्टुरेन्टमा पसेको हुने थिइन ।
“ओहो कमरेड, के छ?” ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै उनीले मेरो ध्यान खिचे ।
म राजनैतिक मान्छे हैन । उनीले पनि खुल्लै रुपमा कुनै पार्टीको प्रचार गरेको देखेको छैन । तर यो उनको थेगो हो या सरसता, उनी जसलाई पनि ‘कमरेड’ नामाकरण गरिदिन्छन् र आफैँ पनि ‘कमरेड’ सम्बोधन गरिन रुचाउँछन् – कम्तीमा पनि अनौपचारिक भेटमा ।
औपचारिकता पुरा गर्नै पर्यो । हात मिलाइयो । धेरै दिनसम्म भेटघाट नभएकोमा गुनासो सुनियो, सुनाइयो । उनको संस्थाका गत केही महिनाका कार्यक्रमहरूको बारेमा बुझियो । फलाना-ढिस्कानाको हालखबर सोधियो । अरू केही आउरे-बाउरे गफ गरियो ।
त्यतिञ्जेसम्ममा उनीले म एक्लै आएको बुझे । एउटै टेबलमा बस्न आग्रह गरे ।
टोकियोको मुटुमा शुक्रवार बेलुका दुई जना खान बसेपछि, शुरुवात त बियरबाटै गर्नुपर्यो । त्यही गरियो – पूर्णिमाले हाम्रो अगाडि दुई गिलास किरिन्-नामा बियर भरिदिइन् ।
हामी कुनै एक संस्थाको मार्फत एक-अर्कालाई चिन्न पुगेका नेपाली हौं । त्यसैले सधैँ कुराकानी नेपालको बारेमा, संस्थाको बारेमा र संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको बारेमा हुन्छ । त्यस दिन पनि कुनै अपवाद हुने कुरै भएन ।
काठमाण्डौंबाट टोकियोसम्म सिधा डोरी टाँग्ने हो भने त्यो पाँच हजार किलोमिटरभन्दा लामो होला । झन् त्यसमाथि पनि आकाश छुने हिमालय, चीनको विशाल धरातल, अनि समुद्र । बीचमा जे-जस्तै भौगोलिक व्यवधान बिछिए पनि, मानसिक दुरी सून्य छ ।
फेरि पनि, हामी नेपाली । नेपाली रेस्टुरेन्टमा जमघट हुँदा सुरुवात केबाट गर्ने भन्ने चिन्तै हुँदैन । खानाको कुरा गरे म:मबाट, गफ गरे नेपालको राजनीतिबाट । मैले पूर्णिमालाई खानाको अर्डर दिएँ । उनले गफको प्रसंग निकाले, “खै, यस्तै चालले संबिधान लेखिएला र ?”
स्वभाविक र सान्दर्भिक चिन्ता थियो ।
“यो, हामी जस्ताले तपाईं जस्तालाई सोध्ने प्रश्न पो त !” मैले उत्तर दिएँ ।
“तपाईंको विचार सोधेको ।”
“संबिधानसभा त्यसैको लागि त छ नि । जनता र नेताले चाहे नआउने कुरै छैन, हैन र ?”
“हाम्रो देशमा चाहेर मात्रै हुँदैन । मूख्य पार्टीहरूमा त्यो मानसिकता नभई हुँदैन ।” उनले केही चिन्ता थपे ।
हामीले एक‍-एक गिलास किरिन्-बियर थप्यौं ।
“पार्टीहरूमा भर पर्ने हो भने त पार्टीतन्त्र भइहाल्यो नि । लोकतन्त्रको युगमा लोकको बिचार अनुसार पो चल्नुपर्यो नि!” यो मैले सधैँ मनमा लिएको बिचार थियो । प्वाक्क भनिहालें ।
“त्यो आइडियल कुरा हो । त्यसको लागि जनताको मनोभव अनुसार नेता चल्नुपर्छ । जापानजस्तो शत प्रतिशत शिक्षित मुलुकमा पनि त्यो पुरै रुपमा सम्भव छैन भने हाम्रो त के कुरा गर्नु!”
उनीसँग रेडीमेड उत्तर पनि थियो, “जब लोकतन्त्रको सिंहासनमा बसेकाहरूसत्ताको खिचातानमा व्यस्त छन् भने संबिधान लेख्ने फुर्सद कसलाई ?”
त्यसपछि कमरेड केही समय चिन्तनमय बने । मैले उनका यी सब चिन्ता पहिला भेटहरूमा सुनिसकेको थिएँ । फेरि पनि सुनिदिएँ, “भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो जत्तिको लामो र गौरवमय ईतिहास कसको छ ? हाम्रो समाजबाट शान्तिका प्रतिक पनि निस्किए, क्रान्तिका पनि । वुद्धको पच्चीस सय वर्ष पहिलेको सन्देश कति देश घुम्दै यहाँ जापान आइपुग्दा त यिनीहरूले समाजलाई यस्तो बनाएका छन् । हामी भने वुद्धहरू र भृकुटीहरू जन्माउने, अनि आफ्नै देशमा काटमार गर्ने !”
सत्य कुरालाई नकार्न मिलेन । तर बेलुकाको मनोरञ्जन सित्तैमा दिनेवाला उनी पनि थिएनन् । मैले मौन बस्ने धरै पाइन । उनीले सोधिहाले, “किन हामी विश्वका सबभन्दा गरीब, अनि यिनीहरू सबभन्दा धनीहरू ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?”
मसित कुनै उत्तर त थिएन । हप्तान्तको बेलुका, मेरो दिमाग थकित र खाली थियो ।
खाली त बियरका गिलासहरू पनि थिए । अनि खाली थिए सँगैका प्लेटहरू, जसमा केही क्षण अघिसम्म म:मका डल्ला र सुकुटीका टुक्रा बिराजमान थिए । ती खाली शिशी र प्लेटहरू हामीलाई व्यंग्य हान्दै र चुनौती दिँदै थिए । पूर्णिमा फेरि अर्डर टिपेर फर्किन् ।
मसँग अभिको सवाललाई मत्थर पार्न सक्ने आत्मविश्वास थिएन । तैपनि हामी नेपालीका केही कमजोरीहरू दिएँ – अशिक्षा, यातायातको अभाव, परिश्रमको अभाव, बाहिरी विश्वसँगको दूरी, र सक्षम नेताको कमी ।
कमरेडको चित्त बुझेन । उनको अर्थ्याए, “ती पनि अवश्य हाम्रो बिकासको ढिलाइका कारणहरू हुन् । हाम्रो दरिद्रताको मुख्य कारण त हामी नेपाली आफैँ र हाम्रो समाजको भ्रष्ट सिस्टम ।”
म मुक भई उनको तर्क बुझ्ने प्रयत्न गरें । एक घुट्की बियरको सहयोग लिएँ । अहँ, त्यसले पनि दिमागलाई तिखार्न सकेन । उनको विद्वताको शरणमा पुग्नुको विकल्प मसँग थिएन ।
“ल भन्नुस्, तपाईंले अहिलेको अफिसमा काम गरेको कति भयो ?” उनीले सोधे ।
“पाँच वर्ष ।”
“कति स्टाफ छन् ?”
“आफ्नै र अन्य कम्पनीका कामदारहरू गरेर यसै होला, पाँच-सात हजार ।”
“अफिस कति बजे शुरु हुन्छ ?”
“नौ बजे ।”
“ती पाँचहजारमा दैनिक कति जना जति नौ बजिसकेपछि अफिसभित्र छिर्छन् ?”
“कारणबिना ढिलो हुने त कोही हुन्न । रेल-दुर्घटना, टाइफु आदिले गर्दा केही ढिला हुन लागेको खण्डमा अफिसका सहकर्मीहरूलाई अग्रिमै जानकारी गराउने चलन छ ।”
“यदि कोही बिनाकारण ढिलो भयो भने के हुन्छ ?”
“ढिलो भएको समय बराबरको तलब काटिन्छ ।”
“कुरा यहाँ छ ।” उनी आफ्नो तर्कलाई माथि पार्ने मौका छोप्दै थिए । मौका पाए ।
मैले पनि एउटा लामो बयानको झन्झटबाट केही बेर छुटकारा पाएँ ।
“यो उदाहरणमा, कुरा के भने कमरेड, जापानीहरू नियमका पक्का हुन्छन् । इमान्दार हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू प्रगति गर्छन् ।”
“इमानदार र पक्का त नेपाली पनि हुन्छन् । बेलायती र भारतीय सेनाका नेपाली डफ्फा हेर्नुस् । भारतदेखि खाडी मुलुक अनि मलेशियाका कम्पनीहरूको गार्डहरू हेर्नुस् । ईमानदारिता र परिश्रमले त त्यस्ता काम ‘नेपाली’ भनेकै भरमा धमाधम पाउँछन् नि !” धेरै अरूबाट सुनेको, र केही आफूलाई लागेको बताएँ ।
“त्यही म भन्न खोज्दैछु ! ती कडा नियम कानूनमा छन् र पो ईमानदार छन् । अलिकति तलमाथि भयो भने कडा सजायँ मिल्छ ।”
“कडा नियम, कडा सजाय त सेनामा पनि हुन्छ !”
“र त सैनिक शासन अथवा हलुका निरंकुशता भएका देशमा भ्रष्टाचार कम र विकास अलि ज्यादा हुन्छ । हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा यो कुरा अलि बढी नै लागु हुन्छ ।”
“लिबिया, म्यानमार र उत्तर कोरियालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ?” मैले उनको तर्कलाई ठट्टा गरेर टार्न खोजेँ । ।
“केही अपवाद होलान् । त्यो नेतामा भर पर्ने कुरा हो । महाथिरको मलेशिया हेर्नुस्, कम्युनिस्ट भियतनाम हेर्नुस्, मुस्सर्फको पाकिस्तान हेर्नुस् । केही निरंकुश थिए र पो तर बिकास र भ्रष्टचार-निवारण सम्भव भयो ।”
उनको कुरालाई पुरै स्वीकार्न नसके पनि दम अवश्य थियो ।
अभि-पूराणको अध्याय अँझै सकिएको रहेनछ । उनीले सोधे, “यो त भयो हाम्रो नेपाल र विदेशको सामाजिक सिस्टमको भिन्नता । हामी नेपालीले नसुधारी अघि लाग्न नसक्ने अर्को कारण छ । सुन्न पाँच-दश मिनेट समय छ तपाईंसँग ?”
पाँच-दश मिनेटको त के कुरा ? मसित पुरै शुक्रबार बेलुकी र त्यसपछिको शनिबार, आइतबार खाली थियो ।
“बास्तबमा, हामी नेपाली हामी आफैँ भित्रैबाट नसुधारी केही हुनेवाला छैन ।”
म ज्ञानी चेला भई उनको प्रवचन सुनिरहेँ ।
“हामी सधैँ समानता र अधिकारको कुरा गर्छौं, राज्यसँग झगडा गर्छौं, टायर बाल्छौं, गाडी तोडफोड गर्छौं, र देश बन्द गर्छौं । तर समानता र अधिकार देशले दिने कुरा हो ? त्यो त हामी आफू-आफूले एक अर्कासँग लिने दिने हो । जब लिने कुरा गर्छौं, कसैले त दिनै पर्यो । त्यो दिने को हो त ?”
मैले बोल्ने बेला आएको थिएन । उनकै शब्दहरूको प्रतिक्षा गरिरहेँ ।
“त्यो दिने नेपाली जनता नै त हो ।” उनले रहस्यको खुलासा गरे ।
“दिने पनि नेपाली जनता, लिने पनि नेपाली जनता ?”
“हो । सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि न हो ! जब नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग ‘अधिकार देऊ’ भनेर माग्छ भने, त्यसको साटोमा त केही दिनै पर्यो ।”
“कर्तव्यको कुरा ?”
“ठिक भन्नुभयो । हामी कर्तव्य चाहिँ ननिभाउने, तर अधिकार मागिरहने । त्यो सन्तुलन कसरी सम्भव छ ?”
कुरा सोह्रै आना सही थियो । जापानी परिवेश केही वर्ष देखेर भोगेको मान्छेलाई त झन चित्त बुझ्दो तर्क थियो ।
उनको कुरा अँझै सकिएको थिएन, “अब कुरा आउँछ, कर्तव्य कसरी निभाउने ? त्यो, दुई किसिमको हुन्छ – कानूनी र नैतिक जिम्मेवारी । कानूनी जिम्मेवारी त पुरा गर्नै पर्यो । साथैमा नैतिक जिम्मेवारी पुरा नगरी हाम्रो समाज सार्थक रुपले बिकास हुन सक्दैन ।”
“नैतिक जिम्मेवारीको मतलब – चन्दा दिने, सामाजिक काममा सहयोग गर्ने जस्ता कुरा गर्नुभा’ ?”
“त्यो त माथिल्लो स्तरको कुरा भयो । अँझै मध्यम वर्गीय सबैले त्यसो गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”
“उसो भए ?”
“यसै, मानवीय काम गर्नु पर्यो । सन्तान उचित शिक्षा दिनुपर्यो । बालक बालिकालाई श्रममा लगाउनु भएन । घरेलु हिंशा रोक्नुपर्यो । महिलालाई किचनमा सीमित राख्नु भएन । जुवातास बन्द गर्नुपर्यो । जातीय भेदभावहरू बन्द गर्नुपर्यो । झुठ रोक्नुपर्यो । आदि, आदि सामान्य कुराहरू न हुन् । तर ती सबै प्रत्येक नेपालीबाट हुनु पर्यो । मानवीय आधारमा बिकास नभैकन देशले भौतिक बिकास कसरी सम्भव छ ?”
त्यसो त राजनैतिक शक्ति, मानव अधिकार संस्था, लेखक र पत्रकारहरू कुन चाहिँले यी विभेदको बिरुद्धमा बोल्ने गरेका छैनन् र ? त्यसो हुँदा हुँदै पनि यी समस्याहरू केही हलुका भएका छैनन् । टोकियोको कुनै रेस्टुरेन्टमा बियरको गफले यी सब ठुला-ठुला समस्याहरू कत्तिको मत्थर हुन्छन्, मैले अनुमान गर्न सकिन । तैपनि उनीलाई मैले भर्खरैको एउटा घटना सुनाएँ, “सुन्नुस् कमरेड ! तीन हप्ता अगाडि एउटा जापानी टिभीमा कुनै नेपालीको बारेमा डकुमेन्ट्री आएको थियो । मेरो अफिसका जापानी सहकर्मीहरूले हेरेका रहेछन्, भोलिपल्ट मलाई बताउँदै थिए । त्यो मान्छे जापानी महिलासँग बिहे गरेर यतै बस्दो रहेछ । उसको नेपालमा घर रहेछ गुल्मीतिरको कुनै बिकट गाउँमा । उता पनि उसकी एउटी श्रीमती रहिछ, पन्ध्र-सत्र वर्षको उमेरमा बाबुले खोजिदिएकी । दुइटा छोरी र एउटा छोरा उतै । टिभीले उसको गाउँको घरसम्म छायांकनसम्म गर्न भ्याएछन् । मेरा सहकर्मीहरूले जब उसको परिवारको बर्णन गरे, म आफैँलाई लाज लागेर आयो । उसको श्रीमती दिनदिनै पानी बोक्न आधा घण्टाको उकालो-ओरालो दैनिक पाँच-सात पटक गर्दिरहिछ, छोराछोरीहरू खाली खुट्टा हिँड्दा रहेछन् । उनीहरू गुन्द्रुक-च्याँख्लाले पेट भर्न बाध्य रहेछन् । बच्चाहरूको खानामाथि माखा-झिंगा, शरिरभरि मयल-घाउ, र कपालभरि लिखा-जुम्राको वर्णन सुन्दा म आफैँलाई उदेक लागेर आयो । त्यो मान्छे यहाँ कान्छी लिएर बस्ने, उसको परिवार भने नेपालमा नरकीय जीवन बिताइरहेका । अब भन्नुस्, केही कमाउने, बुझ्ने नेपालीहरूले त यस्तो गर्छन् भने दुई पेट भर्न धौ-धौ पर्नेहरूलाई कहाँको लोकतन्त्र, संबिधान, र मानव-अधिकारको बारेमा कसले सोच्छ ? कर्तव्य र अधिकारजस्ता ठुल्ठुला आदर्शका कुरा त हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । ।”
कमरेडले केही प्रतिकृया दिएनन् । उनी ट्वाइलेट जान्छु भनेर उठे । हाम्रो गफमा एकछिन ब्रेक पायो ।
साँझको हाम्रो भेटघाटको त्यस मध्यान्तरपछि अभिको बोलीको रफ्तार आश्चर्यजनक रूपमा कम भयो । सायद अधिक बियरको असर थियो ।
भन्नछन् – कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै जान्छन् । कमरेडको गफ समाजशास्त्र, राजनीति हुँदै बिज्ञान-प्रविधि र ईतिहासतिर मोड लिँदै गयो । उनीले केही बेर कम्युनिस्ट रूसले प्रविधिको बिकासको चुलीमा पुगेको, अहिलेको चीनले अमेरिका र संसारलाई जित्न लागेको कुराहरू थपे । त्यसपछि उनले अमेरिकाको चुरी फेरे – केही बेर क्युबा, केही बेर भियतनाम-युद्ध, र केही बेर अफ्रिका र मध्येपूर्वसँगको असफल कुटनीति । उनीले पूँजीवाद असफल भएको दाबी गरे । त्यसलाई पुष्टी गर्न अमेरिका र युरोपमा भएको सामाजिक-आर्थिक असमानताको उदाहरण दिए ।
म आफैँ पनि उनका तर्कहरू झण्डै झण्डै बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ । मेरो लागि यो पूँजीवाद राष्ट्रमा बसेर यिनीहरूको खेदो काट्नु व्यर्थ थियो ।
हाम्रो गफ संसार भ्रमण गरेर अन्तत: नेपाल आइपुग्यो । कमरेडले लोकतन्त्रपछिको सत्ताको लुछाचुँडीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
हर-कोही वुद्धिजीवी, हर-कोही कवि-लेखक, हर-कोही नेतागिरी यो शहरमा छलफलको अन्त्य ‘समय’ सिवाय कसैले गरिदिन सक्तैन । हाम्रो भेटको अन्त्य गर्न सक्ने पनि त्यही ‘समय’ थियो । कमरेडले घडी हेर्दै भनेँ, “मेरो भोलि कार्यक्रम छ । हुन त जापानमा भए पनि नेपाली कार्यक्रम नेपाली समयमा नै शुरु हुन्छ । तैपनि सभा-हलको साँचोको जिम्मा म आफैँले लिनुपर्नेछ ।”
मैले उनको विवशता बुझेँ र त्यसमा सहमति जनाएँ ।
रेस्टुरेन्टको काउन्टरमा भीड अलिक बेसी नै थियो । कमरेडले आधा रकम मेरो हातमा थम्याई बाहिर कुर्ने ईशारा दिँदै निस्किए ।
पैसा बुझ्दै पूर्णिमाले भनी, “आज त तपाईँले अभि दाइलाई साह्रै चर्को घोच्ने गरी भन्नुभो नि ।”
मैले उसको कुरा बुझिन । त्यस दिन म निकै कम बोलेको थिएँ, कसरी उनीलाई असजिलो पर्ने कुरा भन्न सकेँ ?
पूर्णिमाले मेरो असमञ्जसतालाई बुझिछ क्यारे, उसैले थपी, “त्यही टिभीमा देखिएको नेपालीको कुरा । त्यो अभि दाइको अवस्थासँग धेरै मिल्छ ।”
म लज्जित भएँ । तर केही थाहै नपाए जस्तो गरी यो कुरा त्यसै टार्नु बाहेक मसँग अब कुनै उपाय थिएन ।
बाहिर कमरेड मलाई कुर्दै थिए । शुक्रबारको बेलुका, मान्छेको चहलपहल अलि बेसी नै थियो । अधिकांश मानिसहरू जागीरेहरू थिए । उनीहरूलाई सुट र कालो झोलाबाट सजिलै चिन्न सकिन्थ्यो । अनि धेरैजसो तीन-चार जनाको समुहमा थिए र प्राय: रक्सीले मातिएको अवस्थामा थिए । अलि पर तीस-चालीस जनाको संख्याको कलेजका ठिटाठिटीहरूको हुल थियो । सम्भवत: तिनीहरू पनि कुनै रेस्टुरेण्टमा रक्सी पिएर निस्केका थिए । उनीहरू चर्का-चर्का स्वरमा मात्तिँदै कराउँदै र हाँस्तै थिए ।
रेलको स्टेसनभित्र छिरेपछि कमरेडले हात मिलाउँदै भने, “हस् त कमरेड, मिल्यो भने भोलिको कार्यक्रममा आउनुहोला ।”
मैले स्वीकृति जनाउँदै उनीसँग बिदा लिएँ ।
कमरेड अभिको जीवन देखेर मलाई टिठ लागेर आयो । सात समुद्रपारि आइपुग्दा पनि उनीलाई आफ्नो कर्मले छोड्न सकेको थिएन । केही समय पायो कि दुई चार जना नेपालीहरू जम्मा गरेर एउटा संस्था खोल्छन्, दुई चार कार्यक्रम गराउँछन् – भलै त्यसको उपलब्धी सून्य किन नहोस् । उनीले कुन बाध्यताले यतै दोश्रो घरजम गरे, मैले बुझ्न सक्ने कुरो भएन । तैपनि पूर्णिमाको कुरा पत्याउने हो भने नेपालको परिवारलाई पनि चटक्कै बिर्सन सकेका छैनन् । आफ्नो देश अनि आफ्नो पूर्खामा गर्व गर्छन् – त्यो उनको बोलीचालीबाट प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो क्षमताभन्दा निकै टाढाको कुरा भए पनि उनी देशको लागि ठुला-ठुला सपना देख्छन् । यो ‘वाद’को समर्थन र उ: ‘वाद’को बिरोध गर्छन् । तैपनि कुनै खुसी या कुनै बाध्यताले यो समाजको चक्रव्यूहमा फँसेका कमरेड अभि महाभारतका अभिमन्युजस्तै भएका छन् ।
उनी भीडमा नहराउञ्जेलसम्म मैले उनैलाई हेरिरहेँ ।